ढल्केवरमा दुई पसलमा चोरी, प्रमाण लुकाउन चोरी गरेको अनुमान – Mero Pradesh TV
Mero Pradesh TV Desk२०७६ माघ २६ गते
ढल्केवर (धनुषा) धनुषाको ढल्केवरमा एकैरातमा दुई पसलमा चोरी भएको छ । महिमा डिपार्टमेन्ट स्टोर र नमस्ते मोबाइल मलमा चोरी भएको हो ।
शनिबार राति महिमा डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट चोरले सटर फोडेर सि.सि.क्यामराको हार्डडिक्स १ थान, ल्यापटप १ थान र नगद १ लाख पचाच हजार रुपैयाँ चोरी गरी लगेको डिपार्टमेन्टका सञ्चालक शम्भु नायकले बताए । चोरले सटरको तल्लो भाग फोडेर पसलभित्रबाट उक्त सामान चोरी गरेको सञ्चाकले जनाए
प्रमाण लुकाउन चोरी गरेको अनुमान
डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक नायकले प्रमाण लुकाउन चोरी गरेको अनुमान गरेको छ । नायकले केही दिन अगाडि पसलमा भएको झै–झगडाको दृश्य पसलमा जडान गरिएको सि.सि.टि.भी. क्यामरामा कैद रहेकोले सो प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले चोरी गरेको हुनसक्ने अनुमान लगाएको छ ।
सञ्चालक नायकले गएको सोमबार दिउँसो १२ बजेतिरे क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ महेन्द्रनगर बस्ने राकेश कुमार राउतसहित १०–१२ जनाको समुहले पसलमै आएर कुटपिट गरेको बताए । आफ्नो स्टोरमा काम गर्ने क्षीनपा महेन्द्रनगरकै रामभगत चौधरीलाई खोज्न राउतसहित उनीहरु आएका थिए । आफुले चौधरी यहाँ नभएको बताएपछि राउतलगायतका १०–१२ जनाको समूहले म र मेरो भाइ श्याम नायकलाई एक्कासी मरणासन्न हुने गरी हिर्काएको बताए ।
कुटपिटबाट भाइ श्यामकुमार नायक सख्त घाइते भएका थिए । घाइते भाइ श्यामको उपचार जनपकुरस्थित प्रादेशिक अपतालमा गराएको सञ्चालक नायकले जनाए । पछि बुभ्mदा चौधरीसँग राउतले रकम लिनुपर्ने भएकोले खोज्न यहाँ आएका थिए ।
कुटपिटमा सरकारी गाडीको प्रयोग
महिमा डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चाकल शम्भु र श्यामलाई कुटपिट गर्नका समुहले सरकारी गाडीको प्रयोग गरेको बुझिएको छ । सञ्चालक नायकले आफु र भाइलाई कुटपिट गर्न आएका समुहले महेन्द्रनगरस्थित विद्युध प्राधिकरणका ना. २ च. १८४१ नम्बरको पिकअप गाडीमा चढेर आएका थिए । कुटपिट पछि उनीहरु सोही गाडीमा फर्किएका थिए ।
यसैगरी शनिबार राति नै ढल्केवरस्थित नमस्ते मोबाइल मलमा चोरी भएको छ । चोरले सटरमा लागेको ताला फटाएर पसलभित्र प्रवेश गरेपनि १ थाम पावर बैंक र नगद तीन हजार बाहेक अरु चोरी नभएको सञ्चालक शिवकुमार महतोले बताए ।
मन्त्री अर्यालको नेतृत्वमा निगौल गाई गौशालाको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाईएका घर, टहरा भत्काईयो